Wasakhowga hawada ayaa saameeya 8 ka mid ah 10 muwaadin ee adduunka ku nool | Cusbooneysiinta Cagaaran
Wasakhowga hawada ayaa saameeya 8 ka mid ah 10 muwaadin ee adduunka ku nool
La wasakheynta hawada wuxuu saameeyaa in ka badan 8 ka mid ah 10 muwaadin ee adduunka ku nool. Xaaladuna way sii xumaanaysaa, gaar ahaan dalalka soo ifbaxaya. Bishii Meey 12keedii, Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu daabacay muuqaalka guud ee tayada hawada jawi magaalo. Diiwaankan cusub wuxuu daboolayaa 3000 oo magaalo oo ku yaal 103 dal, oo si ficil ahaan u labanlaabaya mugga daraasaddii hore ee la daabacay 2014.
Adduunweynaha, heerarka foojignaanta ee jajab ganaax magaalooyinka waxay ku kordhiyeen 8% 5tii sano ee la soo dhaafay. Haddii xaaladdu ay ka sii yaraan karto ama laga xakamayn karo waddamada qaniga ah, wasakhaynta hawadu way ka sii daraysaa dalalka soo koraya.
Xadka ugu sarreeya ee ay dejisay Ururka Caafimaadka Adduunka waa 20 mikrogram halkii mitir kuyuub oo celcelis ahaan sanadkiiba la isugu soo ururayo jajabyada wanaagsan PM10 hawada sare waana lagu buufiyaa inta badan magaalooyinka magaalooyinka dalalka soo koraya. Magaalada ugu wasakhda badan adduunka ma ahan New Delhi, sidii ay ahayd 2014, hadda waa sidaas Peshawar, waqooyi-bari Pakistan, halkaas oo heerka isku-uruurintu uu gaaro 540 mikrogram halkii mitir cubic.
Peshawar, waa magaalada ugu wasakhaysan adduunka
Ku dhowaad dhammaan degmooyinka leh in ka badan 100.000 oo qof oo ku nool waddamo dakhligoodu hooseeyo ama dhexdhexaad yahay, Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ayaa laga gudbay marinka ugu sarreeya, mararka qaarkoodna si ballaadhan, iyada oo diiwaanno aad uga sarreeya kuwii la diiwaangeliyey xilligii u sarreeyey. wasakheynta dal sida faransiiska oo kale ah.
Pakistan, Afgaanistaan ​​iyo Hindiya waxay u muuqdaan inay yihiin dalalka halista ugu badan leh. Magaalada Karachi, caasimada dhaqaalaha ee Pakistan, ama Rawalpindi, hawadu kama yara neefsato tan Peshawar. Waxaa la mid ah Afghanistan, Kabul iyo Mazar-e-Sharif. Hindiya sidoo kale waxay ugu sarreysaa miiska magaalooyin badan oo wasakhow badan qaba sida Raipur oo ku taal bartamaha dalka iyo Allahabad oo ku taal koonfur-bari ee cusub Delhi, caasimada soo bandhigaysa isku darka 229 mikrogram halkii mitir cubic.
ka wadamada gacanka sidoo kale waxay leeyihiin wasakhda hawada sare. Sacuudi Carabiya, dadka degan Riyaad iyo Al-jubail, bariga dalka, waxay ku xiran yihiin heerar isku-uruurinta oo ka badan 350 microgram halkii mitir cubic. Kuwa Hamad Town, ee bartamaha Baxreyn, iyo Maameer, bariga fog, sidoo kale waxay muujinayaan heerar sare wasakheynta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Wasakhowga hawada ayaa saameeya 8 ka mid ah 10 muwaadin ee adduunka ku nool
Seeraha ayaa u adkeysanaya isbeddelka cimilada markii jawigu hodan ku yahay CO2
Shan jasiiradood iyo magaalooyin dhowr ah ayaa ku baaba'a Badweynta Baasifigga isbeddelka cimilada darteed